Lionel Messi oo sedexley dhaliyay cayaar Barcelona si xarago badan ku dhaaftay Espanyol | Baled Weyn Media Center
Lionel Messi oo sedexley dhaliyay cayaar Barcelona si xarago badan ku dhaaftay Espanyol
Kulankii Catalan Derby ee la islahaa cayaar ayaa kasoo bixi doonto waxay isku badashay mid Barcelona 100% ku gacan sareesay.
Lionel Messi ayaa sedexleey dhaliyay kulan Barcelona 5-0 ku xaaqday kooxda ay dariska yihiin Espanyol.
Barcelona hada waxay wadataa guulaheeda 100% madaama sedex cayaar La Ligaha Spain ay guuleesatay sidaasna ay hogaanka ku heyso waxaana intaas ooga sii wanaagsan inay farqi 4-dhibcood dheer yihiin Real Madrid xili cayaareedka oo bilaw ah.
Saxiixa cusub Barcelona Ousmane Dembele ayaa kulankaan gool caawinaad ka geestay asigoo badal kusoo galay qaybta labaad ee cayaarta.
Messi ayaa cayaarta 1-0 ka dhigay daqiiqadii 26-aad waxaana caawinaad ka geestay Ivan Rakitic, sidoo kale Leo ayaa 2-0 ka dhigay daqiiqadii 35-aad kubad uu caawinaad ka geeestay Jordi Alba.
Messi habeen qaas u ah ayay u ahayd wuxuuna sedexley dhaliyay daqiiqadii 67-aad markalena kubada waxaa caawinaad ka geestay Jordi Alba.
Labada saxiix ee Barcelona ku cusub Ousmane Dembele iyo Paulinho ayaa kulankaan badal kusoo galeen qaybta labaad ee cayaarta waxayna muujiyeen bandhig wacan iyo inay diyaar u yihiin caawinta kooxdooda cusub.
Kooxda Espanyol oo aan waxba loo reebanin waxaa shabqooda soo taabtay Gerard Pique daqiiqadii 87-aad asigoo cayaarta ka dhigay 4-0 sidoo kalena Rakitic ayaa caawinaad ka geestay kubada.
Ousmane Dembele ayaa caawintiisa kowaad loo diiwaan galiyay madaama uu saaxiibkiisa cusub Luis Suarez siiyay goolka 5-aad ee cayaarta.
Garoonka Camp Nou oo ay usoo daawasho tageen 72,875 taageero ah ayaa ku raaxeesteen bandhiga quruxda badan ee xidigaha Barcelona muujiyeen.
Barcelona ayaa guusha ku qaadatay 5-0 sidoo kalena Espanyol dhulka ayaa lagu jiiday wuxuuna tababare Ernesto Valverde ku farxay bandhiga cajiibka badan ee xidigahiisa muujiyeen kulankaan Barca siweyn ugu awood sareesay.